Fanovana governemanta :: Tsy mbola afa-bela ireo minisitra tsy mahomby • AoRaha
Fanovana governemanta Tsy mbola afa-bela ireo minisitra tsy mahomby
Mihelohelo foana ny fanamboarana ny governemanta, na dia re ombieny ombieny aza ny valin-teny manilika an’io safidy politika sy teknika momba an’ireo minisitra io. Azo tamin’ny loharanom-baovao iray, ohatra, « ny fisian’ny hevitra matotra tokoa hirosoana amin’ny fanovana amin’ny ampahany an’ireo mpikambana ».
Tsy voafaritra ny tetiandro mikasika an’izany, saingy tandindonin’ny fanesorana azy amin’ireo toerana kosa ireo minisitra tsy mahomby.
« Miandry fotoana kely fotsiny izany satria isika mbola ao anatin’ny ady amin’ny valanaretina Covid-19. Hisy ny fanoloana an’ireo minisitra ao amin’ny governemanta na dia nilaza ny tsy maha laharam-pahamehana an’izany aza ny lehiben’ny governemanta noho izao hamehana ara-pahasalamana izao », hoy iry loharanom-baovao iry.
Minisitra tsy mbola nahitana solony maharitra, hatramin’izao ny ao amin’ny departemantan’ny Fanabeazam-pirenena. Teo ihany koa ireny disadisa anatiny tao amin’ny governemanta taorian’ny taratasy nalefan’ny minisitry ny Fahasalamambahoaka tany amin’ny mpiaramiombon’antoka vahiny amin’i Madagasikara ireny. Fanampin’ireo ny fanombanana ny asan’ny minisitra tsirairay, indrindra tao anatin’izao vanim-potoana tena manahirana lalovan’ny firenena izao.
Fisokafan’ireo orinasa tsy miankina :: Mitaky fampitomboana ny ora fiasana ireo vondron’ny mpandraharaha